Somaliland News - Dawlada Somaliland oo Qaadacday Shirka Turkiga ee Somalida
Dawlada Somaliland oo Qaadacday Shirka Turkiga ee Somalida
07 May, 2012 - Hargeysa - Dawlada Somaliland ayaa sheegtay inay Qaadacday ka qayb galka shirka bisha soo socota lagu qaban doono wadanka Turkiga, kaasi oo ay lagaga hadlayo sidii Somaliya dib u heshiisiin iyo dawladnimo loogu dhisi lahaa. Wasiirka arrimaha dibada Somaliland Maxamed C/laahi Cumar oo go�aankani ka hadlay ayaa waxa uu sheegay in shirkani uu yahay mid aan Somaliland wax badan ka qusayn maadaama oo ay tahay wadan madax banaan.
Wasiirka oo u waramayey Idaacada afka Somaliga ku hadasha ee BBC-da ayaa sheegay in shirkani yahay mid lagaga hadlay xaga siyaasada Somaliya iyo sidii dawladd loogu soo dhisi lahaa, waxaanu yidhi isaga oo wasiirku arrimahaasi ka hadlaya
�Marka ugu horayso ajandaha shirkan Turkiga lagu qabanayaa uu u badan yahay arrimo xagga siyaasadda ah oo dawlad loogu dhisayo dalka Soomaaliya, arrimahaasina ma aha arrimo khuseeya Somaliland,�.
Dr. Maxamed Cabdilaahi oo hadalkiisa sii watay wuxuu yidhi �Somaliland waa dal madax-banaan oo arrimihiisu u gaar yihiin. kamanay mid ahayd dariiqaas khariiradda nabadda (Road map-ka).sida waraaqaha loo soo dhigayna kama turjumayso qaranimadda iyo madax-banaanida Somaliland, haddii aan arrintaas wax laga qabanna ma filayo inay Somaliland ka qeyb-geli doonto shirkaasi.�
Wasiirka ayaa sidoo kale sheegay in ay shirkaasi ku jiro qodobo ay ka danaynayaan, waxaanu isaga oo arrimahaasi ka hadlayana waxa uu yidhi �Shirkaasi imika sida loo soo dhigay ma ah si aanu ku tagi karno, waxaanu dalbaynaynaa dawladda Turkigu anagoo danaynayna qeybo ka mid ah arrimaha lagaga hadlayo shirkaa qeyb ka mid ah oo xagga dhaqaalaha iyo horumarka u badan inay dib u eegto nidaamka ay Somaliland kaga soo qeyb galayso Somaliland oo aanu jecel nahay inuu noqdo mid la mid ah kii shirkii London aanu kaga qeyb-galay bishii febarwari ee sanadkan,�
Wasiirka oo la weydiiyay mawqifka Somaliland ee la xidhiidha shir Muqdisho ka furmay oo ay ka qeyb galeen Salaadiin aad u badan oo lagaga hadlayo ansixinta dastuurka cusub ee Somaliland, isagoo arrintaasi ka jawaabayayna wuxuu yidhi �Horta marka u horeysa waxaanu rajaynaynaa in lagu najaxo, dedaalka lagu wado sidii Soomaaliya nabad iyo dawladnimo loogu soo celin lahaa. Hase yeeshee dastuurkaas doodiisa, xulashadiisa, arrimihiisa iyo ansixintiisuba oo la sheegay inay Soomaaliya ka bilaabmeen. Waa dastuur aan khusaynin Somaliland.�
Wasiirka oo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu yidhi �Somaliland waa qaran madax-banaan oo dastuur u gaar ah leh oo muddo 21 sanadood ahna dalkeeda madax-banaani ku maamulanaysay, waxaanu ka xunahay in dastuurkaasi la sheegay in arrimihiisa lagu gudo-jiro inuu sheeganayo oo ay ku jirto gobolo ka mid ah Somaliland. Arrintaasna waxaanu u aragnaa mid nasiib darro ah oo aan Soomaaliyana aan wax u tarayn, Somaliland-na aan khusayn, Waxaanu ugu baaqaynaa masuuliyiinta arrintaasi ku hawlan inay ka saaraan sheegashada ay had iyo jeer sheeganayaan gobolo ka mid ah Somaliland�.
Dr. Maxamed Cabdilaahi oo la weydiiyay sida uu u arko salaadiin reer Somaliland ah oo shirka ansixinta dastuurka Soomaaliya lagu soo casuumay, wuxuu ku jawaabay �Salaadiintu iyagaa nagaga lexjeclo badan qaranimadda Somaliland, dalkana iyagaa bud-dhig u ah nabad-gelyadiisa iyo dhismihiisaba. Laakiin arrintan ka qeyb galka dawladda loo samaynayo Soomaaliya iyo dastuurkeeda, arrin sharciga dalku ogol yahay ma aha salaadiinta iyo dadka kaleba way ka war-hayaan xeer baa dalkan ka jira oo aan arrimahaasi fasaxayn.
Dawladda Somaliland iyadoo wakiil ka ah qaranka, waxa dhawaan Baarlamaanka Somaliland u fasaxay inay ku meteli karto dalka wixii wada hadal ah ee lala yeelanayo Soomaaliya. Walaa siyaasiyiin, salaadiin, xisbiyo cid aan dawladda ahayn oo ka qeyb gali kartaa oo sharcigu u ogol yahay wada hadalo nabadeed ama siyaasadeed oo lala galo Soomaaliya ma jirto oo lama ogola.�